Laba Ruux oo la Go'aamiyey in la sii Hayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ruumka lagu hayo dadka la tuhunsan yahay. Sawirle: Fredrik Sandberg/Scanpix.
Laba Ruux oo la Go'aamiyey in la sii Hayo
La daabacay fredag 27 april 2012 kl 12.27
Haweenay iyo wiil 16-jir ah ee lagu tuhunsan yahey iney faro ku lahaayeen dilkii gabadh 19-jir ah ee magaalada Landskrona ayaa la go'aamiyey in ruumka lagu sii hayo.
Wiilkan 16-jirka ah ayaa hore loogu tuhunsanaa inuu ka dambeeyay ama gacan ku lahaa dilka gabadha, halka haweenayda 39 jirka ahina iminka tuhun noocaasiya loo dhigey Ruumka, ahna tuhunka caqli-galka ah.
Maxkamadda degmada Lund oo qaadda dembiyada ka dhaca Landskrona ayaa sheegtay in wada-hadalka maxkamadda la isugu iman doono maanta oo jimce ah goob ku taala magaalada Helsingborg saacaddu kolkay tahay labada iyo barka duhurnimo.
16-jirka ayaa xabsiga loo taxaabay habeennimadii isniinta ee toddobaadkan, kadib kolkii la heley meeydka gabadha 19-jirka ee midida lagu dilay. Halka haweenayda la qabtay fiidnimadii arbacada ee isla toddobaadkan. Habeennimadii khamiista oo wareeysi lala yeeshey haweenayda ayuu goob joog ka ahaa qareenka difaacaya Jörgen Rosén. Isagoona sheegay inay macmiilkiisu iska dheereynayo dembiga lagu tuhunsan yahay, mar uu la hadlayay hayadda wararka ee TT.
Labadan ruux ayuu ciidanka ammaanku qeexay iney qaraabo dhow la yihiin gabadha geeriyootay ee 19-jirka.